Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 10
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 10
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 10
Jesu akawedzera vamwe vanhu makumi manomwe kuvanhu vaaifamba navo. Achivatumira vaviri vaviri.
Kune basa zhinji rekuita. Husimbe hahusi hunhu hwemuKristu.
RUKA 10:1 Shure kwaizvozvo Ishe wakagadza zve vamwe vanamakumi manomwe, akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose, vuye kwose kwaakanga achida kuenda.
2 Akati kwavari: Kucheka kukuru, asi vabati vashoma; naizvozvo kumbirai kunaShe wokucheka kuti abudise vabati pakucheka kwake.
3 Fambai henyu; tarirai ndinokutumai samakwaiana pakati pamapere.
4 Musatora chikwama, kana hombodo, kana shangu, musakwazisa munhu pazira.
5 Paimba ipi neipi yamunopinda, mutange kuti: Rugare ngaruve neimba ino.
7 Garai muimba iyo muchidya nokunwa zvavanazvo; nokuti mubati wakafanirwa nomubairo wake; musapota pota nedzimba.
Vadzidzi vakabuda vari varombo. Kuva vaEvangeri hakuna basa nemari. Vaive vasingazoshanyi kubva mune imwe imba vachipinda mune imwe. Vaizoparidza nekuporesa mune mamwe maguta, vorambwa mune mamwe maguta.
Mwari aizotonga zvakaoma maguta akaramba chokwadi.
RUKA 10:17 Vanamakumi manomwe vakadzoka nomufaro, vachiti; Ishe kunyange nemweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu.
18 Akati kwavari:Ndakavona Satani achiwa kudenga semheni.
MaKristu anogarofadzwa nemasimba anoshamisa.
Jesu akavayeuchidza kuti akadzinga Satani kudenga pakutanga. Saka aive nesimba pamusoro pemweya yakaipa.
RUKA 10:19 Tarirai, ndakakupai simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi; hakunechinhu chingatongokukuvadzai.
20 Asi musafara bedzi nechinhu ichi, kuti mweya inozviisa pasi penyu; asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga.
Jesu akapa vadzidzivake simba rake rinoshamisa. Asi kukunda kwedu ndokunge takanyorwa mazita edu Kudenga kwaasingaonekwe, kwete kubva panyika pakati pezvinhu zvatinoona.
Rangarirai kuti naJudasi aive nesimba iri, asi harina zvaraikwanisa kumubatsira paakasarudza kutevera nekutsvaka mari.
RUKA 10:21 Nenguva iyo wakafara noMweya Mutsvene, akati: ndinokuvongai baba, Ishe wokudenga napasi, kuti makavanzira vakachenjera navakangwara zvinhu izvi mukazvizarurira vacheche. Hon’o baba nokuti ndizvo zvakakufadzai.
Kungwara kwevanhu hakugoni kuzivisa zvakavanzika zveMagwaro. Makore mazhinji mumaunivhesiti nemuzvikoro zvinodzidzwa Bhaibheri hazvingatsananguri chokwadi. Sangano rimwe nerimwe rine nzvimbo dzaro dzekudzidzisa dzinodzidzisa dzidziso dzakasiyana nemamwe masangano. Saka ndechipi chikoro chine chokwadi chakazara? Pakati pazvo chiripo here?
Mwari anozivisa chokwadi chake kuvanhu vatisingafungiri.
Tinofanira kunamata kuti maziso edu azodzwe nechivhura meso. Nekuti tinokwanisa kutadza kuona chokwadi chaicho.
Ruka akatsanangura zvinhu zviviri pahunhu hwevanhu:
zvipirei kubatsira chero munhu anoda rubatsiro rwenyu, asi rangarirai kuti mabasa erudo haana kukosha kukunda kunzwa Shoko raMwari.
Jesu akataura mufananidzo wemuSamaria akanaka akabatsira munhu aive arohwa nematsotsi akakuvara werudzi rwakasiyana naye akashandisa mari yake kuti aripire mubhadharo wechipatara.
Uyu aive muvakidzani akanaka nekuti akatarisa rudzi rumwechete- runova rudzi rwevanhu. Zvimwe zvinhu zvose zvakaita seruvara, tsika, nyika yaaibva, rudzi rwake nezvimwe zvakadaro zvese hazvioneke kana vanhu vachida rubatsiro.
Mune umwe musha maive nevasikama vaviri mukoma nemunun’una. Umwe akabatsira vadzidzi kuti vawane chekudya, mumwe akateerera kuShoko raMwari.
Maria akagara patsoka dzaJesu achiteerera dzidziso dzake.
Marita aipedza nguva yake refu achiitira vadzidzi zvokudya nekugeza midziyo. Akabva anyunyuta kuti Maria aive asingamubatsiri nemabasa emaoko.
Kwatiri vanhu zvinoratidzika kuti Marta ndiye aive munhu ari nani, sezvo aive achishingaira kugutsa matumbu evanhu. Ichi chinhu chakakosha. Vanhu havangararami vasingadyi.
Asi vanozonzwa nzara nekukasika zvakare. Jesu akati zvaive nani kuti munhu agare agutse mweya wake neShoko raMwari. Ipapo unowana Chokwadi chemuBhaibheri chaunozogovana nevamwe. Chokwadi cheMagwaro chinogara nekusingaperi. Unokwaisa kurasikirwa nechekudya chako kumatsotsi, asi Shoko raMwari riri munjere dzako haringabiwi kubva kwauri.
RUKA 10:41 Ishe akapindura akati kwaari: Marta! Marta! Unofunganya nokuzvitambudza nezvinhu zvizhinji.
42 Asi chinhu chimwe chinodikanwa; nokuti Maria wakasanangura mugove wakanaka, waasingazotorerwi.